नेपालको ग्रामीण पर्यटन विकासमा होमस्टे र यसको महत्व-Setoghar
नेपालको ग्रामीण पर्यटन विकासमा होमस्टे र यसको महत्व
नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना निकै राम्रो छ । पछिल्लो समय पर्यटकहरुको मुख्य गञ्तव्य क्षेत्र ग्रामीण पर्यटन नै हुने गरेको छ । ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि अहिले होमस्टे खोल्ने लहर नै चलेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका पर्यटकहरुलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्ने मान्यताको साथ अघी बढाइएको होमस्टे निर्माण प्रति मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो छ । साथै नेपालमा होमस्टेको प्रभावकारिता समेत बढ्दो छ ।
दुर्गादत्त ढकाल कार्यकारी निर्देशक नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)
गाउँठाउँमा जाने पर्यटकहरुको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्यले सञ्चालन गरिएको होमस्टे कार्यक्रम अहिले शैक्षिक कार्यक्रमको रुपमा समेत अघी सञ्चालन गर्ने कार्य नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) बाट समेत भइरहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका पर्यटकहरुलाई कसरी स्वागत तथा सत्कार गर्ने, उनीहरुलाई कस्ता परिकार खुवाउने र होमस्टेको सरसफाइ कसरी गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु समेटिएका छन् । जसले गर्दा होमस्टेले प्रदान गर्ने सेवा थप प्रभावकारी बन्न सकोस् ।
नेपालको ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा होमस्टेले निकै प्रभावकारी भूमीका निर्वाह गर्न सक्छ र गर्दै आएको पनि छ । यद्यपि यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यसको दायरा अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
क्यानोनिङ र बन्जी जम्पिङ :
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनको निम्ति क्यानोनिङ तथा बन्जी जम्पिङ समेत पछिल्लो समय निकै आकर्षक माध्यम हुने गरेका छन् । हुनत ः क्यानोनिङ र बन्जी जम्पिङ जोखिमपूर्ण समेत छन् । तर मानवीय स्वभाव जोखिमता भित्र पनि आनन्द लिन चाहने किसिमको छ । नेपालमा आउने पर्यटकहरु मध्ये पछिल्लो समय जोखिमपूर्ण क्रियाकलापमा रमाउने पर्यटकहरुको सङ्ख्या समेत बढ्दो छ ।
नेपालमा क्यानोनिङ राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र मध्ये एक मानिन्छ । यो पानीको छहराबाट हाम फाल्ने एक किसिमको अनौठो खेल हो । नेपालमा यो क्षेत्र फस्टाउन शुरु भएको धेरै समय भएको छैन ।
बन्जी जम्पिङ :
कुनै अग्लो स्थानबाट बलियो रसी शरीरमा बाँधेर खेलिने बन्जी जम्पिङ प्रति समेत पर्यटकहरुको क्रेज बढ्दो छ । नेपालको भौगोलिक परिस्थिति अनुसार मुलुकका धेरै ठाऊँमा बन्जी जम्पिङ सेवा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छ । पर्यटन क्षेत्र आफैंमा विशाल क्षेत्र हो । पर्यटन अन्तरगत धेरै क्षेत्रहरु रहेका छन् । ती क्षेत्रहरु मध्ये कुनै एक क्षेत्रको राम्रो तवरले विकास हुन सकेको खण्डमा अर्को क्षेत्र पनि सँगसँगै फस्टाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसैकारण भन्न सकिन्छ कि क्यानोनिङ राम्रो तवरले चल्ने हो भने होम स्टे चल्न सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएका अर्गानिक परिकारहरुले बजार पाउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रम नै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन विकासको दिगो अवधारणा :
पर्यटन क्षेत्र विकासको क्रममा त्यस सँग जोडिएका अन्य कुराहरुलाई पनि सँगै लैजान सकिने हो भने मात्र पर्यटन प्रवद्र्धनको दिगो विकास अवधारणालाई साकार बनाउन सकिन्छ । नेपालमा पनि हामीले त्यसै किसिमले कामहरु अघी बढाउनुपर्छ । तर सबै विषयहरुलाई सम्बोधन नगरी केही विषयहरुलाई मात्रै हामीले साथ लिएर अघी बढ्यौं भने हाम्रो विकास अल्पकालिन मात्र हुन सक्छ । यसैकारण दिगो विकासको अवधारणा बमोेजिम हामीले हाम्रो विकासलाई अघी बढाउनुपर्ने जरुरी छ ।
हामेस्टे खोल्दा उपभोक्ताको चाहना बुझ्नु जरुरी :
ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्य सहित होमस्टे सञ्चालन गर्दा त्यहाँ आउने पाहुनाहरुको चाहना के हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा होमस्टे सञ्चालकले ख्याल गर्नुपर्छ । यस्ता कुराहरुमा जानकारी हुनसके मात्र उनीहरुले राम्रो सेवा दिन सक्छन् । सोही बमोजिम हामीले होमस्टे सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेका हौं ।
नेपालमा आएका पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी होमस्टेको अलावा क्यानोनिङ लगायतका कार्यक्रमहरुलाई पनि सम्भव रहेका ठाऊँहरुमा सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा ग्रामीण पर्यटनको विकासले नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार ल्याउन सकिन्छ भने पर्यटकको नेपालमा हने समयलाई बढाउन समेत सहयोग पुग्छ । यस सँगै उक्त क्षेत्रमा अन्य सानो लगानीका अतिरिक्त पर्यटकीय क्रियाकलापहरु समेत गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
विविधिकरण जरुरी छ
पर्यटन प्रवद्र्धनको निम्ति होम स्टे सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि केही सेवाहरु थप गर्नुपर्ने र केही सेवाहरुमा विविधिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । हामीले नियमित रुपमा अहिले सम्म जुन किसिमले सेवा दिँदै आएका छौं, त्यसमा केही परिवर्तन गर्दै विविधिकरण गर्न सकेको खण्डमा त्यसले पर्यटकहरुमा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । यस अन्तरगत खानाको स्वाद अर्थात परिकार तथा स्थान लगायत रहन सक्छन् । साथै खानाको परिकारको हिसाबले हेर्दा पनि नेपाल निकै धनी छ । नेपालको मेची देखि महाकाली सम्म ठाउँको विविधिकरण हुँदै जाने क्रममा ती क्षेत्रका खानाहरुमा समेत विविधिकरण छ । विभिन्न जातजातीका आफ्नै अलग–अलग परिकारहरु छन् ।
होमस्टेमा किन जान्छन् पर्यटक ?
पर्यटकहरुले होटलमा खाने खाना भन्दा होमस्टेमा उपलब्ध हुने खानामा फरक स्वाद र बढी आत्मीयता पाउने भएको कारण होटलको अलावा होमस्टे नै रुचाउने गरेको पनि पाइन्छ । साथै होटलको तुलनामा होमस्टे सञ्चालन कार्य सहज र कम खर्चिलो पनि छ ।
यसकारण एकीकृत कार्यक्रमहरु आवश्यक :
पर्यटन नेपालको परिस्थितिमा निकै सम्भावना रहेको क्षेत्र समेत हो । यसकारण अब नेपालको ग्रामीण प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरी साना होटल तथा लजलाई लक्षित गरिएका तालिमहरु ग्रामीण क्षेत्र सम्म नै सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । जुन तालिम अहिले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले समेत शुरु गरेको छ । हाल नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेका ग्रामीण क्षेत्र लक्षित तालिमहरु अन्तरगत होमस्टे तालिम र साना होटल तथा लज व्यवस्थापन तालिम मुख्य छन् भने शहर लक्षित तालिमहरु अन्तरगत स्थानीय टुर गाइड तालिम, ट्रेकिङ, ट्रेकिङ पोर्टर गाइड, टुर गाईड लगायतका तालिमहरु समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यी सबै शैक्षिक कार्यक्रम तथा व्यावहारिक तालिमहरुको उद्धेश्य नेपालको पर्यटन क्षेत्रको स्तरोन्नतिलाई कसरी माथि उठाउने भन्नेमा नै केन्द्रित छ ।
पर्यटन नेपालको परिस्थितिमा निकै सम्भावना रहेको क्षेत्र समेत हो । यसकारण अब नेपालको ग्रामीण प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरी साना होटल तथा लजलाई लक्षित गरिएका तालिमहरु ग्रामीण क्षेत्र सम्म नै सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । जुन तालिम अहिले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले समेत शुरु गरेको छ । हाल नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेका ग्रामीण क्षेत्र लक्षित तालिमहरु अन्तरगत होमस्टे तालिम र साना होटल तथा लज व्यवस्थापन तालिम मुख्य छन् भने शहर लक्षित तालिमहरु अन्तरगत स्थानीय टुर गाइड तालिम, ट्रेकिङ, ट्रेकिङ पोर्टर गाइड, टुर गाईड लगायतका तालिमहरु समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
यी कार्यक्रमहरु कतिपय नेपाल सरकार अन्तरगतका छन् भने कतिपय नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान आफैंले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु छन् । समग्र रुपमा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुको अनुपात करिब ८० प्रतिशत छ भने नेपाल सरकार अन्तरगत सञ्चालन गरिने तालिम तथा कार्यक्रम २० प्रतिशत छ । यसरी नै नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान अहिले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउँदै नेपाल सरकारको संरक्षकत्वमा आफैं स्वाधीन संस्थाको रुपमा डिन विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन हुने मान्यता बमोजिम अघी बढेको छ ।
के हो मानित (डिन) विश्वविद्यालय ?
एउटा यस्तो विश्वविद्यालय, जसले आवश्यकता अनुसार शाखाहरु खोल्न सक्ने तर अन्य सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसहरुलाई समन्वय नदिने विश्वविद्यालयलाई मानित विश्वविद्यालयको रुपमा लिने गरिन्छ ।
परियोजना कार्यान्वयन द्वन्द्वको समाधान (लोकसेवा टिप्स)
भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम कदम आवश्यक